फाइनलमा मुख्य तीन तत्त्व- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
फाइनलमा मुख्य तीन तत्त्व
असार २९, २०७६ (एएफपी)
लन्डन — आयोजक इंग्ल्यान्डले आइतबार लर्डसमा हुने फाइनलमा न्युजिल्यान्डको सामना गर्नेछ । दुवै पहिलोपल्ट विश्वकप जित्ने अभियानमा हुनेछन् । यो फाइनलका तीन निर्णायक तत्व यी हुनेछन् ।
इयान मोर्गनको इंग्ल्यान्ड सन् १९९२ यता पहिलोपल्ट फाइनल पुगेको छ भने न्युजिल्यान्ड सन् २०१५ को उपविजेतासमेत हो ।
इयान मोर्गन र केन विलियम्सन दुवैसामु अवसर छ, आफ्नो देशको क्रिकेट इतिहासमा नायक साबित हुने । दुवैलेआफ्नो देशलाई पहिलोपल्ट एकदिवसीय विश्वकप उपाधि दिलाउन सक्छन् । सन् २०१५ को विश्वकपमा खराब प्रदर्शन गर्दै पहिलो चरणबाटै बाहिरिएपछि इंग्ल्यान्डले चार वर्षको अन्तरालमा खुबै प्रगति गरेको छ । यसक्रममा इंग्ल्यान्ड क्रिकेटले भयरहित खेल खेलिरहेको छ । अस्ट्रेलियामाथि प्राप्त सेमिफाइनल जितमा ३२ वर्षे मोर्गनले अविजित ४५ रन बनाएका थिए ।
समूह चरणमा इंग्ल्यान्डको हातबाट नमीठो हार बेहोरेको न्युजिल्यान्डले त्यसलाई बिर्साउने गरेर सेमिफाइनलमा भारतलाई पराजित गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘फाइनलमा कुनै पनि टिम विजयी रहन सक्छ ।’ उनी मान्छन्, दुवै टिमले कसरी चुनौती सामना गर्छ, त्यसले नतिजामा धेरै अन्तर पार्नेछ । आफूले यसपल्ट विश्वकपमा खेलेका ८ इनिङ्समा उनले दुई शतक र दुई अर्धशतक प्रहार गरिसकेका छन् । उनको त्यो प्रदर्शनमा परिपक्वता पाइन्छ ।
अस्ट्रेलियामाथि प्राप्त सेमिफाइनल जितमा जेसन रोयले निकै आक्रामक ब्याटिङ गरे । यसक्रममा लयमा रहेका जोनी बेरिस्टोसँग मिलेर पहिलो विकेटका लागि १ सय २४ रनको साझेदारी गरे । यी दुई ब्याट्सम्यानले चार शतकीय साझेदारी गरिसकेका छन् यस विश्वकपमा । चोटकै कारण रोयले तीन खेल भने गुमाएका छन् । उनी चोटमुक्त भएर खेलमा फर्केयता इंग्ल्यान्डले ३ खेल सजिलै जितेको छ । प्रतियोगितामा उनको औसत ७१ रनको छ ।
न्युजिल्यान्डका गुप्टिल भने यस विश्वकपमा रन बटुल्न संघर्षरत छन् । उनले ९ इनिङ्समा १ सय ६७ रन मात्र बनाएका छन् । उनले चार वर्षअघि भने खुबै राम्रो खेलेका थिए । त्यसै क्रममा उनले वेस्ट इन्डिजविरुद्धको एउटै खेलमा २ सय ३७ रन बनाएका थिए । ब्याटमा कमजोर रहे पनि उनी फिल्डिङमा खुबै सटिक देखिएका छन् । उनकै थ्रोमा भारतका महेन्द्रसिंह धोनी रनआउट भएपछि न्युजिल्यान्ड फाइनल पुग्न
सकेको हो ।
म्याट हेनरीले सेमिफाइनलमा भारतको माथिल्लो क्रमलाई खुबै दबाबमा राखेका थिए । उनको प्रदर्शन धेरै हदसम्म न्युजिल्यान्डलाई विश्वकप उपाधि दिलाउन निर्णायक हुनेछ । उनले त्यस खेलमा ३७ रन दिएर ३ विकेट लिए । त्यसमा रोहित शर्माको विकेट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रह्यो । यी पेसम्यानले ८ खेलमा १३ विकेट लिएका छन् ।
यस्तै प्रदर्शन अस्ट्रेलियाविरुद्ध इंग्ल्यान्डका लागि क्रिस वोक्सको रहेको छ । उनले डेविड वार्नरको विकेटसँगै अस्ट्रेलियाको माथिल्लो क्रममा त्रास उत्पन्न गराएका थिए । उनले २० रन दिएर ३ विकेट लिएका थिए । वोक्सले जोफ्रा आर्चरसँग मिलेर १० खेलमा ३२ विकेट लिएका छन् ।
प्रकाशित : असार २९, २०७६ १०:१९
नयाँ विजेताको पर्खाइ
लन्डन — इंग्ल्यान्डले विश्वकपको लर्ड्समा हुने फाइनलमा आइतबार न्युजिल्यान्डको सामना गर्नेछ । यसक्रममा टिमको वर्षौंको योजना एक दिनको खेल परीक्षाबाट गुज्रिने छ । बंगलादेशसँग पराजित हुँदै इंग्ल्यान्ड सन् २०१५ को विश्वकपबाट बाहिरिएपछि कमैले सोचेका थिए, चार वर्षको अन्तरमा यही टिम फाइनल पुग्नेछ ।
कप्तान इयान मोर्गनले ठीकै भनेका छन्, ‘कसैले सन् २०१५ को विश्वकपपछि फाइनल खेल्ने प्रस्ताव राखेको भए, म आफैं पनि हाँस्थें ।’
त्यति बेला हाँस्न नखोज्ने एक जना हुन्थे । ती थिए एन्ड्र्यु स्ट्रस । उनी हुन् इंग्ल्यान्डका पूर्व क्रिकेट निर्देशक । पूर्व कप्तान पनि । उनले इंग्लिस क्रिकेटमा पूर्णतः परिवर्तन गर्न खोजे । सेतो बलको क्रिकेटलाई उत्तिकै महत्त्व दिन खोजे । प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पनि सुम्पे अस्ट्रेलियाली ट्रेभर बेलिसको काँधमा । अहिले यसकै नतिजा देखिएको छ मोर्गनको टिममा । एकदिवसीय वरीयताको शीर्षस्थानमा रहेको इंग्ल्यान्डले फाइनल पुग्न एजबास्टनमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलियालाई सजिलै हरायो ।
प्रतियोगिताअगाडि इंग्ल्यान्डलाई उपाधिको सबैभन्दा बलियो प्रत्याशी किन भनिएको थियो भनेर त्यो प्रस्ट बर्मिङघममा देखिएको थियो । पेसम्यान जोफ्रा आर्चर र क्रिस वोक्सले अस्ट्रेलियालाई एकसमय ३ विकेटमा १४ रनभित्र खुम्च्याइसकेको थियो । पछि बीचतिर लेग स्पिनर आदिल रसिद घातक रहे । जवाफी इनिङ्समा जेसन रोय र जोनी बेरिस्टोले आक्रामक शतकीय साझेदारी गरे । अहिले एकदिवसीय क्रिकेटमा यी दुई सबैभन्दा सटिक प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान जोडी भएका छन् ।
इंग्ल्यान्डले अहिले पस्किरहेको क्रिकेटलाई भयरहित भन्न सुरु भएको छ । सन् २०१५ यता पहिलोपल्ट फाइनल खेल निःशुल्क पूरा इंग्ल्यान्ड टेलिभिजनमा देखाइने भएको छ ।
यसको एउटै उद्देश्य छ, नयाँ पुस्तालाई क्रिकेटप्रति आकर्षित गर्ने । मोर्गनले पनि भनेका छन्, ‘आइतबारको फाइनलबाट हामी भाग्ने छैनौं । यो त अगाडि बढ्ने अवसरमात्र हो ।’ उनको टिमले पछिल्लो समय एकदिवसीय क्रिकेटका विशेषज्ञ टिमका रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गरेको छ । आइतबारको फाइनल किन पनि विशेष हुनेछ भने न त इंग्ल्यान्डले यसअघि विश्वकप जितेको छ न न्युजिल्यान्डले नै ।
त्यसैले यसपल्ट नयाँ विजेता अगाडि आउँदै छ । चार वर्षअगाडि सन् २०१५ को संस्करणमा न्युजिल्यान्डले वेलिङ्टनमा भएको खेलमा इंग्ल्यान्डलाई कसरी एकदिवसीय क्रिकेट खेल्नुपर्छ, त्यो देखाएको थियो । त्यस खेलमा इंग्ल्यान्डलाई सुरुमा १ सय २३ रनमा अलआउट पारेको थियो । त्यसयता उसले १२.२ ओभरमा लक्ष्य पछ्याएको थियो ।
‘त्यति बेला हामी निराशाको अन्तिम विन्दूमा पुगेका थियौं,’ मोर्गनले सम्झन्छन्, ‘हाम्रा लागि त्यो वास्तवमै लाजमर्दो हार थियो ।’ त्यसको केही मात्रामा बदला यसपल्ट इंग्ल्यान्डले लिइसकेको छ लिग चरणको खेलमा १ सय १९ रनले पराजित गर्दै । यी सबै खेलको इतिहासले आइतबार हुने फाइनलमा कुनै अर्थ राख्ने छैन । निकै लामो प्रतियोगितामा न्युजिल्यान्डले चाहिएको बेला लय समात्न सक्छ अनि उसको बलिङ आक्रमण पनि सटिक छ ट्रेन्ट बोल्टको नेतृत्वमा ।
ब्याटिङ भने कप्तान केन विलियम्सन र अनुभवी खेलाडी रस टेलरमा निर्भर हुनेछ । भलाद्मी न्युजिल्यान्ड टिममा लुकी फर्गसनजस्ता खेलाडी पनि छन्, जसले सेमिफाइनलमा भारतमाथि १८ रनको जित निकाल्न ठोस सहयोग गरे । बोल्ट र म्याट हेनरीको आक्रमणसामु विश्व क्रिकेटको सबैभन्दा बलियो ब्याटिङ टिम मानिने भारतले ५ रन बनाउने बेलासम्म ३ विकेट गुमाइसकेको थियो । त्यसलाई सुहाउने गरेर न्युजिल्यान्डको फिल्डिङ पनिगतिलो रह्यो ।
त्यस अगाडि बलरलाई मदत गरिरहेको पिचमा विलियम्सन र टेलरले खुबै संघर्ष गर्दै रन बटुले । न्युजिल्यान्डसँग चार वर्षअगाडि सन् २०१५ मै मेलबर्नमा फाइनल खेलेको अनुभव छ । तर इंग्ल्यान्डले सन् १९९२ मा अन्तिमपल्ट फाइनल खेल्दा अहिलेको टिमका अधिकांस खेलाडी जन्मेकै थिएनन् । ‘हामी क्रिकेटका घरमा फाइनल खेल्दै छौ । हामीमात्र होइन, इंग्ल्यान्ड पनि दबाबमा रहनेछ । हाम्रो उद्देश्य फाइनलमा राम्रो खेल्ने र मज्जा लिनेमा केन्द्रित हुनेछ ।’
प्रकाशित : असार २९, २०७६ १०:१७
महिला ह्यान्डबल सेमिफाइनलमा
लिभरपुलको अग्रता कायम
मेसीले जिते छैटौं पल्ट बेलन डे अर
मेसीको गोलमा बार्सिलोना अगाडि
एपीएफ चन्द्रागिरि च्याम्पियन
लिभरपुल अग्रता बढाउँदै
८१ ५९ २५ १६५
४१ २७ ४८ ११६
२३ ४२ ६९ १३४
१९ २५ २९ ७३
४ १८ ५१ ७३
० ० ६ ६
भ्रमण वर्षको भद्रगोल
सम्पादकीय मंसिर २०, २०७६
२० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० सुरु हुन २६ दिनमात्रै बाँकी छ । तर लक्ष्य जति महत्त्वाकांक्षी छ, समय घर्कंदै जाँदा पनि त्यहीअनुरूप तयारी...
कालापानी र कूटनीति
ध्रुव कुमार मंसिर २०, २०७६
भारतको नयाँ नक्सा प्रकरण र कालापानीमा आफ्नो प्रभुसत्ता खण्डित भएको कारणले नेपालीहरूको विरोध प्रदर्शन एक महिना नाघिसक्दा पनि कुनै न कुनै तवरमा जारी छ ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ मंसिर २०, २०७६
वित्तीय उदारीकरणको नीति अनुरूप लघुवित्त क्षेत्र खुला गरिएपछि निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिले २०५६ साउनदेखि निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आयो । २०७६ असारसम्म त्यस्ता संस्थाको...
पुरुष देहमा त्यस्तो के छ !
निभा शाह मंसिर २०, २०७६
जुन ज्ञान पुरुषले स्त्रीबारे हासिल गरेका छन्, त्यो अधुरो र अपुरो नै हुन्छ । तबसम्म, जन स्टुअर्ट मिलको भनाइमा, ‘जबसम्म स्त्रीले आफ्ना सम्पूर्ण अनुभूतिलाई खुलस्त लोकार्पण गर्दैर्नन् ।’ एक...
के हो डलरवादी ?
उज्ज्वल प्रसाईं मंसिर २०, २०७६
विशेषणका रूपमा ‘डलरवादी’ शब्दको प्रयोग अधिक हुन थालेको छ । सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालमा खोजे यो विशेषण कसले, केका लागि र कसका विरुद्ध प्रयोग गर्छन् भन्ने...
सञ्जय आचार्य मंसिर १९, २०७६
नेपालमा केही वर्षदेखि रेलमार्गको बहस चलिरहेको छ । ब्रिटिस–इन्डिया सरकारले सन् १९२७ मा निर्माण गरिदिएको अमलेखगन्ज–रक्सौल रेलमार्ग (३९ किलोमिटर) र सन् १९३७ मा निर्माण गरिदिएको जनकपुर–जयनगर...
सम्पादकीय मंसिर १९, २०७६
नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू कति जना छन् ? यही तथ्यांकबाटै सुरु हुन्छ उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाहरू जनसंख्याको झन्डै दुई प्रतिशत अर्थात् ५...
महिला नेत्रीको मौनता
प्रतिमा सिलवाल मंसिर १९, २०७६
प्रधानमन्त्रीले गत साता मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । केही मन्त्रीको जिम्मेवारी बदलियो त केही मन्त्री जिम्मेवारीबाट मुक्त भए । सरकार प्रमुखले आफूलाई काम गर्न सहज हुने गरी मन्त्रिमण्डल...
चन्द्रकिशोर मंसिर १९, २०७६
एक भारतीय उद्योगपतिले सत्तासामु प्रश्न तेर्साएको सन्दर्भ अहिले भारतमा चर्चामा छ । आर्थिक जगतका एक अगुवाले शान्त पोखरीमा ढुंगा फाले । गृहमन्त्री अमित शाहको उपस्थितिमै एक सार्वजनिक...
दुइटा फूल देउरालीमा
नन्दकृष्ण जोशी मंसिर १९, २०७६
असंख्य कालजयी गीतका सर्जक, जादुमय स्वरका धनी स्वरसम्राट् नारायण गोपालको सम्झनामा, जसले यो धरती छाडेको पनि २९ वर्ष पुगिसकेको छ । नेपालका सर्वाधिक लोकप्रिय एवं स्वाभिमानी गायकको...